डिभी विजेतालाई स्पोन्सरका लागि कति हुनुपर्छ स्पोन्सरकर्ताको आम्दानी? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
डिभी विजेतालाई स्पोन्सरका लागि कति हुनुपर्छ स्पोन्सरकर्ताको आम्दानी?
रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्ड डिभी लोटरी र मंगेतर भिसा के वानका लागि आई १३४ नामको स्पोन्सर फर्म भर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसका लागि स्पोन्सरकर्ताको निश्चित आम्दानी हुन आवश्यक हुन्छ ।
परिवारमा आधारित ग्रिनकार्ड स्पोन्सर गर्दा जस्तो आई ८६४ फर्म डिभी विजेतालाई स्पोन्सर गर्दा भर्नु नपर्ने भएकाले आई ८६४ को तुलनामा कम आम्दानी भए पुग्छ । किनभने आई ८६४ नामको स्पोन्सर फर्म भर्दा आम्दानीको मापदण्ड पोभर्टी गाइडलाइनभन्दा १२५ प्रतिशतमाथि हुनुपर्छ भने आई १३४ नामको स्पोन्सर फर्म भर्दा पोभर्टी गाइडलाइनभन्दा एकसयप्रतिशतमाथि भए पुग्छ ।
फर्म आई ८६४ भर्ने स्पोन्सरकर्ताले स्पोन्सर गरिएको व्यक्ति अमेरिकामा आएर सरकारी सुविधा खाएमा त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुनसक्छ भने आई १३४ स्पोन्सरमा त्यस्तो बाध्यता नहुनसक्छ । त्यसैले डिभी विजेतालाई स्पोन्सर गर्दा परिवारमा आधारित ग्रिनकार्ड स्पोन्सरको जस्तो काडा मापदण्ड छैन ।
अलास्का र हवाई बाहेक ४८ राज्यमा बस्नेहरुका सन्दर्भमा कोही एकल व्यक्तिले बार्षिक १८ हजार ३ सय १० डलरभन्दा धेरै आम्दानी छ भने एकजना डिभी विजेतालाई स्पोन्सर गर्नसक्छ । तर दुईजना डिभी विजेता वा दम्पत्ति डिभी विजेतालाई स्पोन्सर गर्नुपरेमा बार्षिक आम्दानी २३ हजार ३० डलरभन्दा माथि हुनुपर्छ ।
त्यस्तै डिभी विजेताका दम्पत्ति र एउटा बच्चा रहेको खण्डमा एकल स्पोन्सरकर्ताको आम्दानी २७ हजार ७ सय ५० भन्दा माथि हुनुपर्छ । स्पोन्सर गरिने एकजना व्यक्ति थपिदै जाँदा आम्दानीको मापदण्ड प्रतिव्यक्ति ४७ सय २० डलरले थपिदै जान्छ । अमेरिकामा दम्पत्ति र एउटा बच्चा भएको व्यक्तिले एकजना डिभी विजेतालाई स्पोन्सर गर्नुपरेमा उसको आम्दानी २७७५० भन्दा माथि हुनुपर्छ ।
डिभी विजेतालाई स्पोन्सर गर्दा कतिजना डिभी विजेतालाई स्पोन्सर गर्ने हो र स्पोन्सरकर्ताको परिवारको आकार कति ठूलो छ, त्यो आधारमा आम्दानीको मापदण्ड तय गरिएको छ । हवाई र अलास्काका सन्दर्भमा आम्दानी अन्य राज्यको तुलनामा अझ धेरै हुनुपर्छ ।
४८ राज्यमा हुनेहरुका लागि आम्दानीको मापदण्ड
युएससीआइएसले गतबर्ष नयाँ मापदण्ड अप्रिल १ बाट लागु गरेको थियो । यो बर्षभने मार्च १ बाटै लागु गरिएको छ ।
हवाईमा हुनेहरुका लागि हवाईमा हुनेहरुको तुलनामा अलास्कामा हुनेहरुको अझ बढी आम्दानी हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
अलास्कामा हुनेहरुका लागि